Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Raaz Ee Cabsida Ah Hadana Aadka Loo Jecelyahay (Bipasha Wey Ka Baxsatay) – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Raaz Ee Cabsida Ah Hadana Aadka Loo Jecelyahay (Bipasha Wey Ka Baxsatay)
Raaz waxaa la daawaday maanta oo kale 1 Febraayo sanadki 2002 waana film guul lixaad leh gaaray maadama uu Blockbuster noqday.
Raaz waa film cabsi ah midkiisa loogu jecelyahay kuwa Bollywoodka ilaa hadana daawadayaasha kama xiisa dhigaan daawashadiisa waxaa hogaamiyaal ka ahaayen labada fanka kucusbed xiligaas Dino Morea iyo Bipasha Basu.
Halkaan Hoose Kaga Bogo Xaqiiqada FIlmkaan Ee Kaa Qarsoon:
Xaqiiqada 1aad: Goobta Dino Morea iyo shaqaalihiisa ay ku qarinayaan meydka Malini Sharma goobtaaso ah goob duur ah waa goobta ama meesha lagu duubay heeskii caanka ahaa Dekha Hai Pehli Baar ee kujirtay filmkii Saajan waxaana heeska jileen Salman Khan iyo Madhuri Dixit.
Xaqiiqada 2aad: Doorka Sanjana ee Bipasha Basu jishay waxaa markii hore dooqa kowaad ee ahed loona dhibay atirishada Lisa Ray balse wey iska diiday doorkas atirishadan.
Xaqiiqada 3aad:Dino Morea iyo Bipasha Basu Filmkaan codkooda kuma jiro sababto ah waa loo codeyay waxana u codeyeen oo u hadleen Vikram Bhatt iyo Mona Ghosh Shetty .
Xaqiiqada 4aad: Waa dib usameynta filmka Hollywoodka ah ee lies beneath.
Xaqiiqada 5aad: Filmkaan waxaa tiyaatarada la saaray xili lagu waalnaaa daawashada aflaamta cabsida ah Bollywoodkana xiligaas guulo ayee ka gaarayen sameynta aflaamta cabsida ah sida awged xili wanaagsan ayuu kusoo aaday filmkan.
Xaqiiqada 6aad: Doorka DIno Morea filmkaan kujilay waxa marki hore loo bandhigay Anil Kapoor balse wuu iska diiday xidigaan isagoo aaminsana in aflaamta cabsida ah aysan wax guulo ah ka gaari karin Bollywoodka.
Xaqiiqada 7aad: Filmkaan lacago aad u yar ayaa lagu qarash gareyay sido kalena Dino Morea iyo Bipasha Basu na xiligaas fanka wey ku cusbaayen sida awged mushaar weyn ma aysan ku qaadan waana mida kaliftay in qarashka filmkaan yaraado guul lixaad lehna gaaro.
Xaqiiqada 8aad: Qeybta afaraad ee taxanaha Raaz kaaso lagu magacaabo Raaz Reboot waxaa la daawaday sanadkii 2016 in badan filmkaan waxa laga soo min guuriyay qeybta kowaad ee Raaz ayagoo kooxdan islahaa guul ayuu gaara sida qeybta kowaad oo kale balse Raaz Reboot Flop ayuu noqday.
Xaqiiqada 9aad: Raaz waa film taxanahe ah balse waa qeybta kowaad ee taxanaha ah filmkaan sido kalena waa qeybta guusha ugu weyn gaartay.
Xaqiiqada 10aad: Filmkaan si lama filaan ah ayuu Box-officeka guul wacan kaga gaaray waxuuna kamid noqday Hits ka ugu waaweyn ee ay Bollywoodka sameyeen sanadkii 2002.
Waxaa Aqrisay 586